Ahoana ny atao raha te hihena haingana be?
Mihena haingana be !!
Inona no dikan’ny hoe « mihamatavy » ?
Fantatrao ve ny atao hoe « mihamatavy » ? Mety hitoditodi-doha angamba ianao sady hieritreritra ahy ho vendrana. Nefa ny ankabeazany aminareo dia mino marina tokoa fa mampihena ny menaka, savony, hotra ary dite lazaina fa mampahia. Sa tsy izany ?
Alohan’ny hahalalana ny atao hoe « mihamatavy », andao aloha ho fantarina rahoviana ny olona iray no atao hoe « matavy ».
« Matavy » ny olona iray rehefa misy tavy be loatra izy. Noho izany, ny « mihamatavy » izany dia ny fitomboan’ny tavy amin’ny vatana.
Mbola mino ihany ve ianao fa ny menaka, savony, hotra, na dite dia afaka manala ny tavy amin’ny vatanao ?
Inona no dikan’ny hoe « mihena » na « mihamahia » ?
Raha ny fitomboan’ny tavy amin’ny vatana no atao hoe « mihamatavy », inona ary no dikan’ny hoe « mihena » na « mihamahia » ?
Ny atao hoe : « mahia » dia mifintina, izany hoe zara raha misy tavy amin’ny vatana. Noho izany, ny dikan’ny hoe « mihena » na « mihamahia » dia very tavy mba hifintinan’ny vatana.
Ny tanjontsika rehetra dia ny mampifintina ny vatana. Nefa mbola mila fantarina ny dikan’ny hoe « mihen-danja » mba hahafantarana hoe tena ilaina amin’ny tanjontsika ve izany.
Inona no dikan’ny hoe « mihen-danja » ?
Alohan’ny hamaritantsika ny atao hoe « mihen-danja », andao aloha hijery ny atao hoe « mitombo lanja ».
Ny dikan’ny hoe « mitombo lanja » dia ny fiakaran’ny lanja eo amin’ny fandanjana. Ny lanjan’ny olona iray dia mety hitombo raha ampiana zavatra hafa eo amin’ny fandanjana misy azy. Izany hoe, ny lanjan’ny olona iray dia mety hitombo raha mitombo ny rano, tavy, maloto (caca), menaka, … ao amin’ny vatany, na mitondra vohoka izy. Noho izany, ny lanjan’ny olona iray dia ny fitambaran’ny lanjan’ny taolana, voa, hoditra, volo, rà, maloto (caca), menaka, rano, tavy, …
Ny atao hoe « mihen-danja » dia ny fihenan’ny lanja eo amin’ny fandanjana. Ny lanjan’ny olona iray dia mety hihena raha anesorana zavatra hafa eo amin’ny fandanjana. Izany hoe ny lanjan’ny olona iray dia afaka mihena raha mihena ny rano, tavy, maloto (caca), menaka, … ao amin’ny vatany, na avy niteraka izy.
Raha tianao ny mihena haingana be dia mandehàna aloha milanja. Raiso an-tsoratra ny laharana hitanao nisoratra teo amin’ny fandanjana. Ary mandehana amin’izay mandeha mikaka. Dia avy eo miverena milanja. Tada ! Nihen-danja ianao ! Tsy mahagaga raha kivy ianao rehefa avy mihen-danja !
Ny tanjontsika dia ny mihena tavy mba hifintina ny vatantsika. Mbola mino ve ianao fa te hihen-danja fotsiny ?
Rehefa mifintina ny vatantsika dia mihena ny volume an’ny vatantsika. Ny volume an’ny vatana dia ny toerana alain’ny vatana. Izany hoe lasa tsy mibahan-toerana be ny vatantsika rehefa mifintina isika. Izany hoe lasa tsy ngeza loatra. Ny tanjontsika izany dia ny ho very volume fa tsy lanja.
Ahoana ny ahitana fa tena nihena ianao ?
Ny tanjontsika dia ny mihena mba hihenan’ny tavy sy hifintinan’ny vatana. Izany hoe ho very volume. Mba hahitana fa nihena ny tavy tamin’ny vatanao mba hampifintina anao dia mila metarina ny faritry ny vatana rehetra : sandry, tanana, fe, ranjo, kibo, valahana, tratra, … Raha mitombo ny habean’ireny faritra ireny dia nihanatavy ianao izay. Raha mihena ny habean’ireo faritra ireo dia nihena ianao izay.
Raha tsy izay, raha mihatery aminao ny akanjonao dia nihanatavy ianao izay. Raha nihanalalaka ny akanjonao dia nihena ianao izay.
Mora be ô ?
Inona no mampihena/mampahia ?